Cloud based Clinic and Pharmacy POS system
Websites encompasses several different aspects, including webpage layout, content production, and graphic design.
PRO POS isacloud-based point of sale system.
Windows application, A program that is written to run under the Microsoft Windows operating system, also calleda"Windows app."
A web application or web app isaclient–server computer program which the client (including the user interface and client-side logic) runs inaweb browser.
တော်တယ်ဆိုတာ . . . ကလေးတစ်ယောက်တော်တယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့်တော်ခြင်းကို သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ စာတော်တာကိုအခြေခံပြီး သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။ ကလေးတစ်ယောက် တော်တယ်လို့ပြောရင် ဆရာတို့အနေနဲ့ စာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျောင်းမှာ စာသင်တဲ့အချိန်မှာ ထူးချွန်တဲ့လူဆိုတာမျိုး ဆရာတို့ပြောလေ့ရှိတယ်။ တော်တာကို ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ဉာဏ်ရည်ထက်တာကို ဦးစားပေးဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံးပြောချင်တာက တော်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ထူးခ... Read More
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပီသအောင် ဘယ်လိုကျင့်ကြံရမလဲ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာရာမှာ ပညာရှင်တိုင်းက သဘောတူထားတဲ့ ယေဘူယျအချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။၁။ သူတို့ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ပါးသူကို ဝေဖန်ခွင့်ပေးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းတိုင်းဟာ ဉာဏ်အမြော်အမြင်နဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ထက်တော်တဲ့လူတွေလည်း ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိနေမယ်လိ... Read More
၁ - ပြီးပြည့်စုံခြင်းထက် တိုးတက်မှုရှိခြင်းကို အာရုံစိုက်ပါကိုယ့်အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု တစ် ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကလည်း လက်ခံနိုင်လောက်စရာအကြောင်းတရားပါပဲ။ အရင်ကလုပ်ခဲ့သမျှကို ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သလို အရာရာကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲ စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကို သိပ်ပြီးအာရုံမထားပါနဲ့။ တိုးတက်မှုအနည်းငယ်ကိုသာ အလေးထားပါ။၂ - ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ် တရားသေကြီးနဲ့&nbsp; '' ငါက ဒီလိုလူပဲ " လို့... Read More
We hope that you will continue to join us on our journey as we help you Grow Your Business!